Gaar ah: Markii ugu horreysay ee farshaxanka | Abuurista khadka tooska ah
Maanta waa maalinta farshaxanka caalamiga ahWaxaa laga yaabaa inaan dabaaldegno qayb ka mid ah adduunkeenna oo naga dhigaya aadanaha ugu badan. Nooc muujinta dabeecadeena ah oo sii kordhayay kuna faafayay dhammaan wejiyada noocyadeenna. Fanku waa buugaag, farshaxanku waa sawir, muuqaal, filim, hees, fasiraad ... Laakiin Weligaa ma isweydiisay yaa ahaa aabbayaashii dhaxalka aan maanta ilaalinayno? Weligaa ma isweydiisay sida iyo goorta farshaxanku dhashay?
Halkan waxaa ku yaal asalka farshaxanka, sawirka, muusikada, sawir qaadista, filimka iyo shabakadda. Waan ogahay inaan ka tagay farshaxanno kale oo waaweyn sida jilista, qoob ka ciyaarka ama qorista qorista ... Laakiin waxaan ogahay in sameynta qoraalkan aysan macquul aheyn in la isu keeno dhammaan farshaxanka, marwalba waan ka tagi lahaa qaar (taas oo ah calaamad aad u wanaagsan) . Ku raaxayso!
Farshaxankii ugu horreeyay taariikhda
Shayga ugu da'da weyn ee la sameeyay ayaa ka weyn 400.000 oo sano, wuxuu leeyahay qaab aadane, sida lagu sheegay daraasad ay sameysay joornaalka 'Anthropology Actual', qeyb ahaan waxaa sameeyay dad. Waxaa laga helay Marooko qiyaastii 1999 illaa iyo markaasna dooddu way sii socotaa maxaa yeelay saynisyahanno badan ayaa hela sababo ku filan oo lagu caddeeyo inay tahay abuur ay sameeyeen awoowayaasheen, in kasta oo ay sidoo kale jiraan koox kale oo saynisyahanno ah oo difaacaya in qaabku u dhacay si kama 'ah. ifafaale nabaad guur.
Sawirka koowaad taariikhda
Daqiiqada uu bini aadamku awoodey inuu xariiqo oo uu macno u yeesho waxay ahayd daqiiqadaas oo uu si macno leh ula xiriiray cabbir ka sareeya isla markaana uu awood u yeeshay inuu soo galo dunida soo saarista iyo fikradaha. Ka soo horjeedda wixii muddo dheer la fikirayay, Homo sapiens ma ahayn kii ugu horreeyay ee sameeya muuqaal muuqaal ah. Khadkan u eg qaabka zigzag ee lagu sameeyay qolofta mollusk wuxuu inka badan yahay 400 kun oo sano, sidaa darteed runtii wuxuu ahaa wakiilka ugu caansan ee genuskeena, Homo erectus, kaasoo awalba awood u lahaa inuu astaan ​​iyo ka fekero wax la taaban karo. Shaqada ugu yar ee farshaxanka oo waligeed bedeshay fikradaha laga qabay taariikhda hore iyo heerka horumarka ee awoowayaasheen hanteen.
Heesta ugu horeysa taariikhda
Muusikada ayaa laga yaabaa inay tahay qaabka farshaxan ee ugu caamsan uguna madax bannaan ee jira. Luqad wax ku ool ah oo ku filan oo lagu soo gudbiyo macluumaadka awood iyo xoog iyada oo aan loo eegin sababo dibadeed. Si ka duwan farshaxanka muuqaalka ah, muusiggu uma baahna nooc kasta oo diyaargarow hore ah oo loo soo bandhigo, nooc kasta oo aqoon ah ama dhaqan aasaasi ah. Waxay naga farxin doontaa xoojinta isku midka ah iyadoon loo eegin nooca aqbalaadda aan nahay. Daraasado badan ayaa la sameeyay si loo ogaado waxa ay ahayd heestii ugu horreysay ee uu abuuray ninku tan iyo markii uu adduunka yimid. Qiyaastii 3400-meeyadii, kiniiniyada dhoobada qaar ayaa laga helay Mesobotamiya, gaar ahaan gaar ahaan godad laga qoday qasriga Royal ee Ugarit. Waxay ka hadlaysaa heesaha ugu horreeya ee uu bini aadamku curiyey. Waxay yihiin 1400 sano (waxay ka tirsan tahay XNUMX BC) waana halabuur loo sameeyay si loogu yeero Goddess of the Gardens, Nikkal, oo magaceedu la micno yahay Marwayn Weyn iyo Hooyo midho dhala ee Yarikh, Ilaaha Dayaxa. Kiniiniyada ayaa bixiya tilmaamo ku saabsan sida dulucda loogu tarjumi doono kataarad ama kataarad.
Sawirkii ugu horreeyay taariikhda
Waxaa loo yaqaan Point de vue du Gras waxaana laga qabtay qiyaastii sanadka 1826 injineerkii halyeeyga ahaa Nicéphore Niépce oo ka soo baxay bakhaarkiisa. Ka dib markii lagu sameeyay falanqeyn sawirka ah aaladda 'X-ray spectrometer', walxaha loo adeegsado in lagu qaado sawirka ugu horreeya ayaa la muujiyay: Saxan culus oo saxan sawir ah oo lagu daboolay nooc dareeraha ah oo isku dar ah bitumen iyo saliid lavanta ah oo adkeynaya ama xoojinaya markii ay u soo baxdo iftiinka qoraxda. Waxaa lagu keydiyaa Jaamacadda Texas ee Austin.
Filimkii ugu horreeyay taariikhda
Xaqiiqdii haddii aad isweydiiso muxuu ahaa fiidiyowgii ugu horreeyay ee lagu qabto taariikhda aadanaha, qorayaasha sida Lumière ama Thomas Edison ayaa kugu weeraray, laakiin runtu waxay tahay in midkoodna seddexdaan jilaa uusan qabsan filimkii ugu horreeyay laakiin uu ahaa hal-abuurka Faransiiska Louis Le Prince ee beerta soddoggiis gurigiisa oo ku taal England. Waxaa loo yaqaan "The Roundhay Garden Scene" waxayna leedahay waqti aad u gaaban (gaar ahaan 1,66 ilbiriqsiyo) laakiin waa ku filan tahay in loo tixgeliyo filimkii ugu horreeyay taariikhda. Waxaa la duubay qiyaastii Oktoobar 14, 1888, taas oo ah, laba sano ka hor Thomas Alva Edison iyo toddobo sano ka hor walaalaha Lumière. Waxay ka kooban tahay 20 loox oo markii, lagu soo saaro Le Prince projector-ka 12 loop halkii ilbidhiqsi, na siiya muddada 1,66-seken ee cajaladda ah. Si kastaba ha noqotee, dib-u-habeyn dijitaal ah oo dhowaan la sameeyay ayaa ballaadhisay muuqaalka illaa 52 loox, oo markii dib loogu ciyaaro hadda 24 loox ee xawaaraha labaad ee shineemo caadi ah, laga helo cajalad labaad oo 2,11 ah oo la ballaadhiyay.
Si kastaba ha noqotee, aabaha runta ah iyo abuuraha shineemada ayaa aakhir naxdin leh oo qarsoodi ah lagu qariyay. Waxaa la waayey bishii Sebtember 16 iyada oo aan raad laga helin qiyaastii 1890kii Faransiiska. Wuxuu qaatay tareen uu ku soo booqdo walaalkiis ka dibna wuxuu aaday Mareykanka si uu u soo bandhigo waxa uu alifay iyo helitaanka shatiga. Wuxuu fuulay tareenkaas wuuna ka dhuuntay dhulka. Meel raad ah kamuu tagin. Meydkii iyo alaabtiisii ​​waligood lama helin. Aragtida ugu ballaaran ee la tixgeliyo ayaa ah in lagu dilay amarka Edison si loo helo patent-ka cinwaanka filimka.
Degelkii ugu horreeyay taariikhda
Tim Berners Lee wuxuu bilaabay World Wide Web hab lagu isweydaarsado macluumaadka kumbuyuutarrada. Bishii Abriil 30, 1993, dukumintigii ugu horreeyay ee qof walba u furan ayaa la daabacay wuxuuna noqonayaa boggii ugu horreeyay ee taariikhda aadanaha. Ujeedada Berners-Lee, oo markaas jirtay 34 sano, waxay ahayd inuu hagaajiyo maaraynta macluumaadka Xarunta Yurub ee Qaybta Fiisigiska (CERN) oo uu ka soo shaqeeyay Switzerland “Waxaan joognay 1989, internet-ka horey ayuu u jiray, waan awoodnay dir e-mayl laakiin ma jirin bogag ku yaal shabakadda. Ma jirin http ama html. Waad la tashan kari weyday bog si aad u aragto waxa ku jira. Waxaan bilaabay inaan aad uga xumaado arintaas. Waxaan maleeyay nidaam kaas oo, qaab fudud, qof uu ku booqan karo hal bog midba kan kale halkaasna waxaan ka go'aansaday waxa aan doonayo inaan dhiso ”, ayaa ku sharaxay abuuraha wareysiga. Waad booqan kartaa ka soo xiriir.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Gaar ah: Markii ugu horreysay ee farshaxanka
10 talooyin aad u faa'iido badan oo loogu talagalay naqshadeynta baakadaha